Vatosoa Verdelite dia turmalin maintso - horonantsary
Ny vatosoa Verdelite dia turmalin maintso. Izahay dia manao firavaka vita amin'ny vatosoa vita amin'ny verdelite ho toy ny kavina, peratra, rojo, haba na pendant. Hevitry ny verdelite.
Mividiana verdelite voajanahary ao amin'ny magazay
Izy io dia karazana turmalinina maintso manokana, indraindray kosa dia heverina ho turmalinina maitso amin'ny varotra. Miaraka amin'ny loko manomboka amin'ny herinaratra mamirapiratra ka hatrany amin'ny maitso mavana maloto ka mahatonga azy io ho vato tadiavina indrindra ao amin'ny fianakaviana vato miloko.
Mineraly silicate boron kristaly mitambatra misy singa toy ny aliminioma, vy, manezioma, sodium, lithium, na potassium. Voasokajy ho vato semi-sarobidy izy io.
Green tourmaline dia cyclosilicate peratra mpikambana enina manana rafitra kristaly trigonal. Mitranga izany raha toa ka lava sy matevina amin'ny kristaly matevina prismatic sy columnar izay matetika misy telozoro amin'ny fizarana miampita, matetika miaraka amin'ny endrik'ireo miforitra miforitra. Ny fomba famaranana amin'ny faran'ny kristaly indraindray dia tsy simetrika, antsoina hoe hemimorphism. Ny kristaly prismatika kely mahia dia mahazatra amin'ny granita granite tsara antsoina hoe aplite, izay matetika mamorona lamina toy ny daisy. Verdelite tourmaline dia miavaka amin'ny prisma misy lafiny telo. Tsy misy mineraly iraisana hafa manana lafiny telo. Ny tarehy Prisma dia matetika manana striations mitsangana mavesatra izay miteraka vokatra telozoro boribory. Green tourmaline dia tsy dia fahita eoropeana.
Hevitry ny verdelite
Vatosoa io manome hery famonoana olona, ​​hery mitohy, hery ara-tsaina ilaina amin'ny fahatsapana ny filamatra. Hisarika fananana, fitiavana ary fahasalamana izay tadiavin'ny tompony izy io. Ny vato dia hanampy amin'ny fanaovana mpisava lalana ny lalan'ny harena tsara. Vato vatosoa izy hanovana ny minus ho plus. Hiteraka kofehy vintana izany. Ny vatosoa dia manome anao fotoana hanoherana zava-baovao. Hanana fotoana hialana amin'ireo sakana voafetra ianao. Manakana anao tsy ho afa-po amin'ny toe-javatra ankehitriny. Vato vatosoa izy io ary manitatra betsaka ny mety ho an'ny ho avy.
Izahay dia manao firavaka manokana miaraka amin'ny vatosoa verdelite napetraka ho kavina, peratra, rojo, haba na pendant.
Inona no ampiasaina amin'ny verdelite?
Green Tourmaline dia mety amin'ny tanjona fanasitranana, satria afaka mifantoka ny herin'ny fanasitranana, manadio ny aura ary manaisotra ny sakana. Green Tourmaline dia matetika ampiasaina amin'ny fanokafana sy fampandehanana ny chakra Heart, ary koa ny fanomezana fiadanam-po sy fitoniana amin'ny fo sy ny rafi-pitatitra.
Aiza no hividianana verdelite?
Izahay dia mivarotra verdelite ao amin'ny fivarotanay
Mahalana ve ny verdelite?
Ny tahirim-bolan'ny turmine maintso lehibe dia any Brezila, Namibia, Nizeria, Mozambika, Pakistan ary Afghanistan. Fa ny tourmaline maitso miloko tsara sy mangarahara dia zavatra tsy fahita firy amin'ny toeram-pitrandrahana vatosoa rehetra. Ary raha, ankoatr'izay, tsy misy fampidirana koa izy ireo, dia tena irina tokoa.
Sarobidy ve ny verdelite?
Ny tourmaline maintso dia lafo indrindra rehefa misy manga ao aminy na miseho ho toy ny emeraoda sy ilay tourmaline chrome.
Tourmaline mason'ny saka